HARDWARE CHAIN ​​Factory - Sina HARDWARE CHAIN ​​mpanamboatra, mpamatsy
Hihaona amin'ny torolàlana farany an'ny National Association of Chain Manufacturers (NACM)
Fantsom-pitaovana ankapobeny ho an'ny fampiharana amin'ny fambolena, indostrialy ary trano.
Fitaovana: vy ambany karbaona
Namboarina tamin'ny “RG30”
Voasedra ny porofo
Drafitra famolavolana 4: 1
Famaranana ny lokon'ny tena, vita amin'ny zinc nopetahany takela-bato, faranana mafana
FAMPITANDREMANA: AZA Mihoatra ny fetra fandefasana entana!
TSY HO AN'NY FITSIPETRA MAZAVA
NACM2010 CHAIN ​​MASINA
Rohy fohy, matetika ampiasaina amin'ny vavahady rambony, fitaovana fambolena ary fitaovana indostrialy
INCH SIZE ORDINARY MILD STEEL CHAIN ​​Rohy fohy
Ny Chain tsotra dia amboarina avy amin'ny vy ambany karbaona ary misy amina karazana rohy. Mety ho an'ny fampiharana marobe manerana ny indostrian'ny famokarana, ny ranomasina ary ny fambolena. Ny rojo mahazatra dia omena tsy voasedra sy tsy nasiana tombo-kase ho an'ny vahaolana ara-toekarena indrindra amin'ny fampiasana tanjona ankapobeny.
Rohy maharitra fohy aostralianina
Ny rojo rohy fohy an'ny Australian Standard dia vita amin'ny vy ambany karbaona ary misy amina karazana rohy. Mety ho an'ny fampiharana marobe manerana ny indostrian'ny famokarana, ny ranomasina ary ny fambolena, ity karazana rojo marobe ity dia porofoina farafahakeliny indroa ny enta-mavesatra farany ambony natolotra ho an'ny fampiasana ara-dalàna.
DIN5685A / C (SEMI LONG LINK / LONG LINK) SAFIDY
Ho an'ny fampiasana ankapobeny izay tadiavina ny fitifirana sy ny fahafaha-manao fanampiny. Azo alaina amin'ny rohy mahitsy sy mihodina izy io. Ampiasaina amin'ny fampiharana an-trano sy amin'ny fitaovam-pambolena izy io.
DIN5685C (DIN Vaovao 5685-1) SAFIDY LONG LINK
Ny fampiasana dia misy rojom-biby mifamatotra, rojo fampiharana fambolena, sakana sehatra na rojo mpiambina.
Ny rohy mahitsy sy ny rohy mihodina dia samy misy
SAFITRA Rohy maharitra STANDARD AUSTRALIANINA
ASTM80 GRADE43 SAFITSARANA avo lenta
Mihaona amin'ny fanovana farany an'ny ASTM A413
Natao hampiasaina amin'ny famatarana entana, famaky, fitrandrahana ala ary fampiharana hafa
Namboarina tamin'ny “RG43”
Drafitra famolavolana 3: 1
ASTM80 GRADE 30 PRUF COIL CHAIN
NACM2010 MASINA SAFIDY - RENY MAHAY
NACM2010 MASINA SAFIDY - TWIST LINK
NACM2010 SAFIDY MANDRESY
Ny famolavolana midadasika dia mamela ny rohy hifampikasa malalaka, manala ny fironana kink na fatotra.
Fitaovana ankapobeny amin'ny toeram-piompiana sy indostria.
Tantely mpampitohy vy ho an'ny Sewag, G80 firaka vy fitaterana fanandratana rojo, Rohy fohy an'ny ranomasina, G80 Fantsom-pifandraisana amina rojo 80 firaka rojo, Fangarony vy rojo, Fitaterana milina rojom-bolo,